प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे बेलायती प्रधानमन्त्री टरिजा मे र राजकुमार ह्यारी, के के भयो कुराकानी ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे बेलायती प्रधानमन्त्री टरिजा मे र राजकुमार ह्यारी, के के भयो कुराकानी ?
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २८, २०७६ मंगलबार
बेलायत भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बेलायती प्रधानमन्त्री टरिजा मेबीच भेटवार्ता भएको छ । लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको भेटमा द्धिपक्षिय हितका विषयमा कुराकानी भएको हो।
भेटका क्रममा व्यापार, लगानी, लगायतका विषयमा केही सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । १७ वर्ष पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो बेलायत भ्रमणका क्रममा ब्रिटिस गोर्खा सेनाका मुद्दामा समेत छलफल भएको छ ।
यसैबीच बेलायत भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती राजकुमार ह्यारीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । पूर्वी लन्डनमा रहेको केन्सिंगटन पैलेसमा राजकुमार ह्यारीसग भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।
बेलायली प्रधानमन्त्री टेरिजा मेसँग भेटवार्ता गर्नुअघि उहाले राजकुमारसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो । भेटवार्तामा द्धपिक्षीय सम्वन्धका विषयमा छलफल भएको थियो । साथै भुकम्प गएको केही समयपछि नेपाल भ्रमणमा आएका राजकुमार ह्यारीले त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उहाकी पत्नी राधिका शाक्य पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले पनि छलफल गरेका छन् । संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुल आचार्यले गैर आवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने नागरिकताका विषयमा जिज्ञासा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निवेदन देऊ : निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत अवस्थामै फर्किएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण
सर्वोच्चद्वारा ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपाको पक्षमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादमा ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपाको मागको पक्षमा फैसला
अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डमा मर्निङ्गवकको समयमा ६६ वर्षिया महिला बलात्कृत, बलात्कार आरोपमा १९ वर्षीय किशोर पक्राउ
अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डमा मर्निङ्गवकको समयमा ६६ वर्षिया महिला बलात्कृत भएकी छिन्। बुधबार बिहान ६ बजेको समयमा
२४ घण्टाभित्र शुल्क नघटाए ८ वटा प्रयोगशालाको कोरोना परीक्षण अनुमति खारेज गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएको भन्दै आठ वटा प्रयोगशालालाई तत्काल शुल्क घटाउन निर्देशन